विक्रम गिरी/काठमाडौँ, १३ चैत । नेपालले नामिबियामा खेल्ने भनिएको एकदिवसीय सिरीज स्थगित भएको छ । कोरोना भाइरसका कारण नेपालले खेल्ने आइसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग दुईअन्तर्गतको नामिबिया त्रिकोणात्मक सिरिज स्थगित भएको हो ।
अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसीसी) ले आगामी जुन ३० तारिखसम्मका लागि नामिबिया सिरिजलगायत सबै प्रतियोगिता स्थगित गरिएको जनाएको छ । आइसीसीले यसअघि नेपाल, नामिबिया र स्कटल्याण्डबीचको सातौँ चरणको त्रिकोणात्मक सिरिज आगामी वैशाख ८ देखि १५ गतेसम्म गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । विश्वभर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिँदै गएकाले उक्त सिरिज स्थगित गर्नुपरेको आइसीसीले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको हो ।
यस्तै आइसीसीले लिग दुईअन्तर्गतकै पपुपा न्यू गिनीमा हुने भनिएको नेपाल, पपुवा न्यू गिनी र युएईबीचको सिरिजसमेत स्थगित गरेको छ । आठौँ चरणको उक्त त्रिकोणात्क सिरिज आगामी जुन ९ देखि १६ तारिखसम्म सञ्चालन गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ । आइसीसीले यसअघि नै चैत १९ देखि २६ गेतसम्म हुने भनिएको लिग दुईअन्तर्गतको छैटौँ चरणको अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेटस् (युएई) र स्कटल्याण्ड बीचको सिरिज रद्द गरिसकेको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण युएईको दुबईस्थित आइसीसीको मुख्यालयसमेत अहिले बन्द छ । स्थगित भएको सिरिज आगामी सेप्टेम्बरमा गर्ने आइसीसीले जनाएको छ । आइसीसी विश्वकप लिग दुई सन् २०२२ सम्म सञ्चालन हुनेछ । लिग दुईमा नेपालसहित अमेरिका, स्कटल्याण्ड, ओमान, युएई, नामिबिया र पपुवा न्यू गिनी छन् । प्रत्येक राष्ट्रले ३६ एकदिवसीय खेल खेल्ने छन् ।
लिगको शीर्ष तीन टोली सन् २०२३ को विश्वकप क्रिकेटको छनोटमा सोझै स्थान बनाउने छन् । बाँकी चार टोलीले विश्वकप छनोटमा प्रवेश पाउनका लागि फेरी प्लेअफ खेल्नेछन् । उक्त प्लेअफमा लिग दुईबाट आउने चार टोली तथा च्यालेञ्ज लिगबाट आउने दुई टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
विश्वकप छनोट सन् २०२२ मा आयोजना हुनेछ । विश्वकप छनोटमा सुपर लिगका पुछारका पाँच, लिगबाट आएका तीन तथा प्लेअफबाट आउने दुईसहित १० टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । विश्वकप छनोटको विजेता र उपविजेता टोलीले सन् २०२३ मा भारतमा आयोजना हुने विश्वकप क्रिकेटमा भाग लिन पाउने छन् । नेपालले गत माघ तेस्रो साता घरेलु मैदानमा ओमान र अमेरिकासँग विश्वकप लिग दुईको पहिलो त्रिकोणात्मक सिरिज खेलको थियो । उक्त सिरिजमा नेपाल ओमानसँग दुवै खेलमा पराजित भएको थियो भने अमेरिकासितका दुवै खेल जितेको थियो ।
नेपालले हालसम्म खेलेका चार खेलमा दुईमा जित तथा दुईमा हारका साथ चार अङ्क बटुलेको छ । नेपालले लिग दुईअन्तर्गत अब ३२ खेल खेल्न बाँकी छ । लिग दुईमा हालसम्म ओमान शीर्ष स्थानमा छ । ओमानले खेलेका १० खेलमा आठमा जित तथा दुईमा हारसँगै १६ अङ्क बटुलेको छ । लिगको दोस्रो स्थानमा अमेरिका रहेको छ । उसले १२ खेलमा छ मा जित तथा छ मा हारसँगै १२ अङ्क बनाएको छ । यस्तै स्कटल्याण्ड आठ खेलमा चारमा जित तथा तीनमा हारका तेस्रो स्थानमा छ । नामिबिया सात खेलमा चारमा जित तथा तीनमा हारका साथ चौथो स्थानमा छ । युएई सात खेलमा तीनमा जित तथा तीनमा हार ब्यहोर्दै लिगको पाँचौँ स्थानमा छ ।
नेपाल चार अङ्क बटुल्दै छैठौँ स्थानमा छ भने पपुवा न्यू गिनी हालसम्म खेलेका आठवटै खेलमा पराजित हुँदै अङ्कबिहीन अवस्थामा छ । आइसीसी विश्व कप क्रिकेट लिग दुई सन् २०२३ मा आयोजना हुने विश्वकपसम्म पुग्ने सिँढी हो । आइसीसी लिग दुई सन् २०१९ को अगस्तदेखि शुरु भएको हो ।
टी ट्वान्टी विश्वकपको एसिया छनोट ‘बी’ स्थगित
यस्तै आगामी जुन २६ देखि जुलाई २ ताारिखसम्म मलेसियामा हुने आइसीसी पुरुष टी ट्वान्टी विश्वकपको एसिया छनोट ‘बी’ प्रतियोगितासमेत अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको आइसीसीले जनाएको छ । उक्त प्रतियोगितामा नेपालसहित मलेसिया, भुटान, चीन, म्यानमार र थाइल्याण्डले खेल्ने तालिका तय गरिएको थियो । रासस
आइसीसी विश्वकप क्रिकेटclose
पोग्वालाई बेच्नै पर्ने दबाबमा म्यानचेस्टर युनाइटेड !
कोरोना भाइरस कारण म्यानचेस्टर सिटीका प्रशिक्षक ग्वार्डिओलाकी आमाको निधन
नेयमार र एमबाप्पेले पिएसजी एकसाथ छोड्लान् त !
लकडाउनका बखत वाल्करले घरमा पार्टी गरेपछि…
कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न युवराज सिंह गरे ५० लाख सहयोग
च्याम्पियन्स लिग र युरोपा लिगको फाइनल खेल अगष्टमा !
कभिड-१९ : फिफा १७ वर्ष मुनिको महिला विश्वकप फुटबल स्थगित
अब के गर्छन् कोटिन्हो ?
टोकियो ओलम्पिकः फुटबल खेलाडीको उमेर एक वर्ष बढाउने तयारी
पोग्वा पुरानै क्लब फर्किने सम्भावना बलियो, डि लिटलाई म्यानचेस्टरले अनुबन्ध गर्नसक्ने
गल्फ खेलाडी प्रतिमाले फोर्ब्स सूचिमा परेको खुसी बाँढ्न पाइनन्
खेलाडी किन्न पर्याप्त बजेट मोउरिन्होले नपाउने भएपछि…
राकिटीक बेच्न बार्सिलोना तयार
रियल मड्रिडको पहिलो रोजाईमा एमबाप्पे
बेल्जियमको लिग रद्द गर्ने निर्णय, ब्रुगलाई उपाधि
यस सिजनको प्रिमियर लिगको भविष्य अनिश्चित
चर्चित खेलाडी गम्भीरले राहत कोषमा दुई वर्षको तलब जम्मा गर्ने
ह्यारी केन म्यानचेस्टर सिटीमा फिट
क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई किन घृणा गर्छन् अर्जेन्टिनीहरु ?
काठमाडौं, २४ चैत । सरकारले राष्ट्रबैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले...